KDE Plasma: Chii icho uye inoisa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19? | Kubva kuLinux
KDE Plasma: Chii icho uye inoisa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?
Isu tinopota tichitsikisa nhau dzichangoburwa kubva KDE Plasma (5.17, 5.16, 5.15, 5.14, pakati pevamwe), kana pane vamwe Musoro kurova kwaro, kana kuti App inonakidza nekuti zvataurwa Desktop Nzvimbo.
Mune ino post isu tichaisa pfungwa kunyanya pa Chii? y Unoisa sei?. Kusimbisa, chokwadika, izvozvi DEBIAN GNU / Linux meta-kugovera, mune yazvino ichangopfuura shandurola nhamba 10, kodhi zita Buster. Iyo irowo parizvino hwaro hweiyo kugovera MX-Linux 19 (Yakashata Duckling).
KDE Plasma Kufanana nevamwe vazhinji Nzvimbo dzeDesktop (DE) izvo zvinoita hupenyu paari GNU / Linux Inoshanda Sisitimu, Iyo ndeimwe yekare dhata, iyo nekufamba kwenguva yave imwe yeanonyanya kushandiswa, pakuve yakanaka, yakajeka, yakakwana uye inoshanda.
Kubva pane yazvino 5 version, inozivikanwa nezita rekuti Plasma. Uye zvakafanana chii GNOME inouya senge Nzvimbo dzeDesktop default (default) yevakawanda GNU / Linux Distros.
1 Zvese nezvePlasma
1.3.1 Uchishandisa iyo Tasksel rairo kuburikidza neGrafu Yekushandisa Yekushandisa (GUI)
1.3.4 Mamwe maviri epamutemo akasiyana ekuisa kuburikidza neCLI
1.3.5 Zviito zvekuwedzera kana zvekuwedzera
KDE mune rake 1.0 version yakaburitswa musi we 12 de julio de 1998 uye mune yazvino 5 version, inozivikanwa se KDE Plasma yakaburitswa pa 15 de julio de 2014.
Izvozvi iri Desktop Nzvimbo inoitirwa kupa kuvandudzwa kwekuona chiitiko kutaridzika kutarisa uye nyore kushandisa kune chero mushandisi uye pane chero Kugoverwa kweGNU / Linux.
Kubva pakutanga, akatarisisa fambisa iko kushandiswa uye domain kune mushandisi yeese mabasa, maficha uye mashandiro ayo anouita, kuburikidza ne chitarisiko chakachena uye kuverenga kwakanakisa (mharidzo), nenzira yakadaro, kupa inovandudzwa yekudyidzana mushandisi ruzivo, yazvino uye yakachena.
Zita rako (KDE) is "Kool." Desktop Environment". Iyo yakaumbwa zvachose nechena Yemahara Software uye Yakavhurwa Sosi (Free uye Vhura Source Software - FOSS).
Icho chikamu che KDE chirongwa zvinoenderana ne KDE Sangano. Uye yakavakirwa pane iro rekushandisa QT.
Iyo ine yakanakisa kusangana pamwe neiyo X Window Sisitimu inoratidza server, uye ine rutsigiro rwakanaka nekubatanidzwa ne wayland, kusvika padanho iro rinokutendera iwe kushandisa iyo fractional kuwedzera, kana mune mamwe mazwi, inobvumidza iko kugadziridzwa kwehukuru hweese zvinhu zve desktop, yemahwindo, emafonti uye emapanera nenzira yakakwana yekutarisa kwe HiDPI.
Pakati pehunhu hunomira parizvino ndehwaro yakanaka uye inoshanda Desk uye yayo yakakura ecosystem yekushandisa. Uye kunyangwe zvakadaro, ndizvo yakajeka uye inoda mashoma masosi kushanda nemazvo.
Iyo yazvino vhezheni vhezheni yeiyo GNOME Desktop Nzvimbo iri vhezheni nhamba 5.17.
Una yakasimba track rekodhi nhoroondo.
Mumwe zvakakwana zvinyorwa zvakarongeka uye yakagadziridzwa pamhepo.
Yakanaka, yakakwana uye yakagadziridzwa ecosystem yezvishandiso uye mafomu.
Una nzanga huru yevashandisi uye vanopa inotsigirwa nesangano rakasimba rinozivikanwa.
A Graphical User inowanikwa (GUI) inogadziriswa zvakanyanya, yakafanana chaizvo neWindows, inopfuura GNOME uye imwe inozivikanwa zviri nani.
Inowanzoonekwa se yechipiri inonyanya kushandisa zviwanikwa Desktop Nzvimbo, ipapo GNOME.
Kazhinji inoda kadhi yemifananidzo o yakanaka graphical simba kuratidza yayo yakanaka uye ine simba Graphical Mushandisi Yemukati mukati mayo mese kubwinya (GUI).
Iyo yakakwira nhanho yekugadzirisa uye yakawanda yekumisikidza sarudzo inogona kuve yakaoma kana inogona kukundikana nekuda kwekutadza kubata zvakanaka.
Para Dzidza ZVIMWE Kubva pane imwechete iwe unogona kushanyira zvinotevera webhu zvinongedzo:
KDE Project Yepamutemo Webhusaiti
KDE Plasma Yepamutemo Chikamu
Kunyorera zviri pamutemo
Ruzivo uye Nhau dzevashandisi
Ruzivo uye Nhau dzevagadziri
Uchishandisa iyo Tasksel rairo kuburikidza neGrafu Yekushandisa Yekushandisa (GUI)
Sarudza iyo KDE Plasma Desktop Nharaunda uye chero chimwe chinhu chinoshandiswa kana seti yemamwe mapakeji.
Cherechedza: Iwe unogona zvakare kumisikidza iyo Desktop Nharaunda yakavakirwa pa KDE Plasma nyore kana kukwana nekutsiva iyo package kde-plasma-desktop kubudikidza plasma-desktop, kde-standard o kde-full.
Mamwe maviri epamutemo akasiyana ekuisa kuburikidza neCLI
Dzorera uye pinda mukati nekusarudza iyo KDE Plasma Desktop Nharaunda, kuitira kuve neanopfuura imwe Desktop Nzvimbo yakaiswa uye isina kusarudza iyo SDDM Login maneja.
Cherechedza: Mushure mekuyedza iyo KDE Plasma Desktop Nharaunda yakaiswa, unogona kuisa iyo yekuwedzera maapplication emuno uye anodikanwa plugins zvakafanana, senge, semuenzaniso:
Uye rangarira, iyi ndiyo yechipiri post yezviteedzana nezve GNU / Linux Desktop Nzvimbo. Yokutanga yakanga iri pamusoro GNOME uye chinotevera chichava pamusoro XFCE.
Tinovimba izvi "inobatsira shoma posvo" nezvake «Entorno de Escritorio» anozivikanwa nezita rekuti «KDE Plasma», yaimbozivikanwa chete se «KDE», imwe yeanonyanya kushandiswa nhasi munyika ye «Distribuciones GNU/Linux», ive yekunakidzwa uye yekushandisa, yeiyo yese «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» uye yemupiro mukuru mukupararira kweinoshamisa, hombe uye kukura ecosystem yezvishandiso zve «GNU/Linux».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » KDE Plasma: Chii icho uye inoisa sei pane DEBIAN 10 uye MX-Linux 19?
Ndeipi vhezheni yeplasma yaizoiswa?
Pindura kune zvishongo
Kwazisai Jlendres. Ndatenda nekutaura kwako. Iyo yauinayo mune zvinyorwa zveDistro yako yaizoiswa.
"Iyo yazvino vhezheni vhezheni yeGNOME Desktop Nzvimbo ndiyo vhezheni nhamba 5.17."
Kwaziso Mikelete. Mhinduro yako ndeyechokwadi chaizvo. Kuburikidza neiyi link iri mukati yechinyorwa chinonzi: Ruzivo uye Nhau dzevashandisi unogona kusvika kubhuku iri razvino pamubvunzo wakabvunzwa: Zviziviso zvekutanga Plasma 5.17.5 ( https://kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php?site_locale=es ).
Mhoroi, ndanga ndichireva kuti chinyorwa chinoisa yakagadzika vhezheni yedesktop "GNOME", uye inofanira kuisa KDE.
Iwo ekubatanidza kwekutanga echinyorwa akange atogadziriswa nezuro. Kutenda kune iyo info!
Maviri matsva ekufungidzira kuuraya kusagadzikana akawanikwa achikanganisa Intel
Coral, Google's Artificial Intelligence chikuva chakafanana neDPI